"Vonjeo izahay, Jehovah Andriamanitray ô, fa Ianao no iankinanay." 2 Tantara 14:10
"Andriamanitra no mahay mamonjy." 2 Tantara 25:8
Rehefa tanora, dia mitady fomba iavahana amin’ny hafa, ka ny sasany dia manisy soratra eny amin’ny akanjony. Tsy ela akory izay, dia izao no soratra nataon’ity mpianatra iray teo amin’ny akanjony: «Afaka manampy anao i Satana». Fihetsik’olona leon’ny zava-drehetra ve, sa fihantsiana, sa fiantsoana vonjy?
Marina fa mody mikarakara ny olombelona i Satana, nefa ny tanjony dia ny hitarika azy hiaraka aminy, hanalavitra an’Andriamanitra, ho any amin’ny fijaliana mandrakizay. Ny olona sasany dia nanolotra ny fanahiny ho an’i Satana, mba hananany harena eto an-tany. Hadalan’ny olona manadino ny mandrakizay izany…
Mila fanampiana angamba ianao. Ny fahatsapana hoe marefo ny tena dia tsy midika ho hakanosana, fa fiekena tsotra fotsiny ny tsy fahaizana mamaha samirery ny olana rehetra mipetraka eo amin’ny fiainana. Te hanampy antsika Andriamanitra. Izy dia tia antsika, fa tsy mba tahaka an’i Satana. Naneho ny fitiavany antsika Izy, raha maty teo amin’ny hazofijaliana Jesosy Kristy, Zanany Lahitokana (Romana 5:8).
Izay mino Azy dia voavonjy, ary afaka manararaotra ny fanampiana avy amin’Andriamanitra. Efa nampanantenaina antsika izany, ary mandray anjara amin’izany Ilay Andriamanitra Telo Izay Iray. Andriamanitra Ray dia “famonjena antsika sy ampingantsika” (Salamo 33:20); Andriamanitra Zanaka, nilaza hoe: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva” (Matio 28:20); ary Andriamanitra Fanahy Masina “no mamonjy ny fahalementsika” (Romana 8:26).
Misalasala ve ianao? Lazao amin’i Jesosy, Ilay Andriamanitra Zanaka, hoe: “Mino aho; vonjeo aho ho afaka amin’ny tsy finoako” (Marka 9:24).